नेपालमा के गरे राम रहिमले - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
५० वर्षीय चर्चित बाबा जो आफूलाई धर्मगुरु, सामाजिक लिडर, निर्देशक, अभिनेता तथा रकस्टार मान्थे । विकिपिडियामा गत सोमबारदेखि तिनै बाबाको एउटा नयाँ परिचय ‘क्रिमिनल’का रूपमा थपिएको छ । धर्मका नाममा आफ्नो छुट्टै साम्राज्य खडा गरेर राजशी जीवन बिताइरहेका बाबा गुरमित रामरहिम दुई महिलालाई बलात्कार गरेको प्रमाणित भएपछि २० वर्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।
अझ रोचक र दृश्यमा नदेखिएको तथ्य के छ भने यी तिनै बाबा हुन्, जसले नेपालमा भूकम्प जाँदा ८ सय गाडी तथा ६ सयभन्दा बढी स्वयंसेवक लिएर नुवाकोटका ग्रामीण बस्ती चहारेका थिए । मिडियामा त्यति नआएको उनको नेपाल कनेक्सन आफैंमा रमाइलो छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाम जोडेर राहत बाँड्न नेपाल आएका बखत उनले आफ्नो साम्राज्य विस्तारका लागि नेपालका हाइप्रोफाइलहरूसँग जोडिने असफल प्रयाससमेत गरेका थिए । राहतलाई माध्यम बनाउँदै उनले डेरा सच्चा सौदाको नेपाल शाखा खोल्ने प्रयाससमेत गरेको बताइन्छ ।
भूकम्प गएको करिब १ सातापछि नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिका–७ स्थित देवीघाट मन्दिरलाई डेरा सच्चा सौदा लेखिएको सैनिक पोसाकका ३ सयजति मानिसले सेल्टर बनाएका थिए । उनीहरूले करिब ५० भन्दा बढी भारतीय नम्बरका ट्रक त्यहाँ पुर्‍याएका थिए । ती कसरी आए केका लागि आए भन्ने कुरा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलालाई पनि थाहा थिएन । त्यसरी ठूलो टिम नै त्यहाँ आएर बसेपछि उनले सोधीखोजी गर्दै जाँदा पत्ता लाग्यो भारतीय बाबा भनिने रामरहिम सिंह तथा उनका सहयोगीहरू भूकम्पपीडितलाई राहत एवं सहयोग वितरण गर्न आएका रहेछन् ।
जिल्लामा राहत तथा सहयोगका लागि आएका जुनसुकै संघ–संस्थाले पनि आउनु अघि जिल्ला प्रशाशनबाट स्वीकृति लिनुपर्‍थ्यो । सिधै आएर आफूखुसी काम गरेको थाहा पाएपछि प्रजिअले एक्सन लिए । ‘मानवीय हिसावले राहत तथा उद्धारमा आएको टोलीलाई किन फर्काउनु भनेर पछि त्यही वडामा काम गर्ने गरी सहमति दिइयो ।’ निरौला भन्छन्– ‘तर पछि बुझ्दै जाँदा ठूला नेताको दबाबमा शक्ति जमाउने प्रयासमा लागेको पाइयो ।’ सुरुमा एउटा वडामा राहत बाडन सहमति दिए पनि राम रहिमले राजनीतिक पावर लगाएर जिल्लाभर नै एक्लै राहत तथा पुन:स्थापनाको कार्य सञ्चालन गर्छु भनेर दबाब दिन थाले । जिल्लाभर अन्य सहयोगीलाई पस्न नदिने र आफू एक्लै राहत तथा पुन:स्थापना गर्न सक्षम भएको भन्दै सम्पूर्ण जिल्ला आफूलाई मात्र दिन विभिन्न तहका नेताहरूबाट दबाब सिर्जना गर्न थाले ।
७ नम्बर वडाको जिम्मेवारी पनि पूरा नगरी अन्य स्थान पनि दबाबका भरमा माग्न थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र रामरहिमबीच टसल भयो । ‘एउटा वडामा पनि राम्रोसँग राहत तथा उद्धारमा खटिएको नपाएपछि अन्य स्थानमा जाने स्वीकृति दिन मेरो नैतिकताले मानेन ।’ प्रजिअ निरौलाले भने– ‘पछि मैले नुवाकोटको रूप परिवर्तन गर्न खोजेको थिए, सिडियोले काम गर्न दिएन भन्दै हिँडेको सुनें ।’ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको सम्पर्कबाट त्यहाँ पुगेका बाबाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि विभागीय मन्त्रीहरूसम्मलाई दबाब दिन लगाएको प्रजिअ निरौला आरोप लगाउँछन् । कांग्रेसका स्थानीय नेता जगदीश नरसिंह केसी, पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसीदेखि लिएर राप्रपाका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीसम्मको दबाब तत्कालीन प्रजिअमाथि थियो । ती नेतालाई प्रयोग गरी रामरहिमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको नुवाकोट भ्रमणका बेला उनको संस्थालाई खुला रूपमा काम गर्न दिनु भन्नसमेत लगाएको बताइन्छ ।
मोदीको नाम भजाएर आएका थिए नेपाल
नेपालमा भूकम्प आएका बखत बलात्कारको आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका रामरहिमको उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिविआई)ले उनको मुद्दा हेरिरहेको थियो । त्यतिवेला रामरहिमलाई सिविआईले अनुमति बिना देश छोडेर अन्त नजान उर्दी दिएको थियो ।
भूकम्पपछि उनले मानवीय राहत तथा उद्धारमा जाने भन्दै नेपाल आउने अनुमति मागेका थिए । अनुमति पाएको दुई दिन पनि नकटी डेरा सच्चा सौदा हरियाणाको नामबाट ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहयोगमा नेपालका भूकम्प पीडितलाई राहत सामग्री’ लेखिएको ब्यानर बोकेर करिब ८ सय ट्रक तथा ६ सय स्वयंसेवक लिएर काठमाडौं आएका थिए रामरहिम । काठमाडौं आएर सुरुमा नुवाकोट पुगेका रामरहिमले तीन सय स्वयम सेवक खटाएर त्यहाँ ५० देखि ८० ट्रक राहत सामग्री बाँडेको तत्कालीन प्रजिअ निरौला बताउँछन् । एक साता त्यहाँ बसेर राहत तथा उद्धारमा खटिए पनि स्थानीय बासिन्दाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध नभएपछि उनी रातारात स्वंसेवक सहित काठमाडौं फर्किएका थिए ।
काठमाडौं आएर दुई दिन ललितपुरका विभिन्न स्थानमा राहत बाँडेको भनिए पनि कहाँ राहत बाँडियो भन्ने कुरा भने खुलेको छैन । त्यत्रो राहत र जनशक्ति लिएर आएका रामरहिमले अन्य सहयोग र जनशक्ति कहाँ प्रयोग गरे कसैलाई थाहा छैन । भूकम्पका बेला करिब १० दिन नेपाल बसेका रामरहिमले यहाँबाट फर्किएर गएपछि पुन: १५ दिनका लागि नेपाल आउन निवेदन दिएका थिए तर सीआईबीले अनुमति नदिने कुरा थाहा पाएपछि उनले आफैं निवेदन फिर्ता लिएको बताइन्छ ।
किन रोजे नुवाकोट
भारतका प्रभावशाली नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएर छोटो समयमै पावर गेन गरेका रामरहिमले भूकम्प आएका बेला नेपालमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थिए । देशको राजनीतिमा दह्रो प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरूको जिल्लाका रूपमा लिइन्छ नुवाकोटलाई । रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत, जगदीश नरसिंह केसी नेपाली कांग्रेसमा दह्रो प्रभाव पार्न सक्ने नेता हुन् । राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि त्यहींबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे तथा जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमाल पनि नुवाकोटकै हुन् । त्यस्तै नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता हितबहादुर तामाङ तथा राधिका तामाङ पनि त्यहींबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । नुवाकोट जिल्लाभर राहत एवं पुन:स्थापनाको जिम्मा लिएर यी प्रभावशाली नेतालाई आफ्नो हातमा लिई शक्ति आर्जन गर्ने राम्रो अवसरका रूपमा लिने सोचका साथ रामरहिमले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालमा शाखा खोल्न चाहान्थे
रामरहिमको डेरा सच्चा सौदाका विश्वभर ५ करोड अनुयायी भएको दाबी गरिन्छ तर नेपालमा उनका संगठित अनुयायी भने अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । भूकम्पका बेला सहयोग गर्न आउँदा उनलाई सहयोग गरेका व्यवसायी भरत खड्का आफू डेराको संगठित अनुयायी नभएको बताउँछन् । ‘मैले ७ दिन नजिक बसेर सहयोग गर्दा कुनै नेपाली संगठित अनुयायी भएको पाइन्,’ खड्का भन्छन्– ‘तर व्यक्तिगत रूपमा एक दुई जना भेट्न भने आउने गरेका थिए ।’ खड्कालाई डेराका तर्फबाट नेपालमा पनि संगठन विस्तार गर्न काठमाडौंमा ८/१० रोपनी जग्गा खोज्न भनिएको थियो ।
त्यसका लागि सल्लाह गर्न तीन चार पटक खड्कालाई हरियाणसमेत बोलाइएको थियो । ‘म आफैं व्यापारी भएको हुँदा त्यहाँ समय दिन पाउँदिन थिएँ ।’ खड्का भन्छन्– ‘अर्को कुरा मानिसलाई भगवानका रूपमा पुज्न मेरो मनले मान्दैन, त्यही भएर भेट्न गइन् ।’ यद्यपि भारतसँग नेपालको प्रत्यक्ष र व्यापक सम्बन्धका कारण डेराका आश्रमहरूमा केही नेपालीहरू अनुयायी वा सेवादारका रूपमा कार्यरत रहेको हुनसक्ने अनुमान जोकसैले
लगाउन सक्छन् ।
राष्ट्रपतिले भेट दिएनन्
तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न रामरहिमले ठूलै पापड बेलेका थिए । उनले चिनेजानेका नेतादेखि तराई तिरका नेताहरूलाई समेत उक्त काममा लगाएको बताइन्छ । पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले लामो समयदेखि विवादमा रहेका र अदालतमा मुद्दा समेत चलिरहेका अभियुक्त भएको हुँदा रामरहिमलाई नभेट्ने अडान राखेपछि रामरहिमको प्रयास असफल भएको थियो ।
रामरहिमको नेपाल कनेक्सन
१२ वैशाख २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण काठमाडौंसहित देशका १४ जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको थियो । अधिकांश मानिस घरबार छोडेर खुला स्थानमा शरण लिन पुगेका थिए । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका जनता कहीँबाट केही राहत पाइन्छ कि भन्ने आशामा थिए भने केही पहुँचवाला आफ्नो क्षेत्रमा डोनेसन गरी दिने दाता तथा सहयोगीहरूको खोजीमा थिए । यसै क्रममा भूकम्पले निकै क्षति पुर्‍याएको काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्ला नुवाकोटका नेताहरू उक्त क्षेत्रमा राहत सामग्री प्रदान गर्ने दाताहरूको खोजीमा थिए । नेपाली कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेता भरत खड्का आफ्नो गच्छेअनुसार ५/७ सय त्रिपाल लिएर गाउँ गए तर त्यो सबै पीडितका लागि पर्याप्त थिएन ।
गाउँ जानुअघि उनको मनमा एउटा उपाय फुर्‍यो । भरतले आफ्नो दिल्ली भ्रमणका क्रममा भेट भएका चर्चित भारतीय बाबा गुरमित रामरहिम सिंहलाई सम्झिए । भेटका बखत उनका अनुयायीले भनेका थिए, ‘विभिन्न विपत्तिमा बाबाले ठूलो सहयोग गर्दै आउनुभएको छ ।’ भरतले करोडौं अनुयायी भएका बाबाका ती नजिकका चेलाको नम्बर लिएर आएका थिए । ‘डायरीमा भएको नम्बरमा डायल गरे ।’ भरतले साप्ताहिकसँग भने, ‘उनीहरू पनि राहत लिएर नेपाल आउन लागेका तर यता कसैसँग सम्पर्क नभएकाले अलमलमा परिरहेका रहेछन्, मैले फोन गरेपछि उनीहरूलाई पनि सजिलो भयो ।’
दिल्ली फोन गरेर नुवाकोट लागेका खड्का तीन दिन गाउँमै बसे । फोन सम्पर्क राम्रो नभएकाले बाबाको राहत आउला–नआउला उनी ढुक्क थिएनन्, तर नुबाकोटबाट फर्किएको दुई दिनपछि बाबा रामरहिम गाडीको लावालस्करसहित काठमाडौं आइपुगेर उनलाई सम्पर्क गरे । ५ सयभन्दा बढी १२ चक्के ट्रक तथा २ सयभन्दा बढी मिनीट्रकको लस्करमा बाबा रामरहिम आफैं नेपाल आएका थिए । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाक भएकाले धेरैको ध्यान त्यतै केन्द्रित थियो ।
बाबा रामरहिमले पनि बारपाककै नाम सुनेका रहेछन् र उनले जान चाहेको पनि त्यही थियो तर खड्कासँग भेट भएपछि भने बाबाको मन फेरियो । बारपाकमा धेरैले सहयोग गरिरहेको अनि आफ्नो क्षेत्र पनि त्यत्तिकै प्रभावित भएको तर अहिलेसम्म कहीँबाट सहयोग नपाएको बेलीविस्तार लगाएपछि बाबा नुवाकोट जान तयार भए । काठमाडौं आइपुगेको दिन बिहानको खाना खड्काकै घरमा खाएका बाबा रामरहिमसहितको टोली अबेर दिउँसो नुवाकोटका लागि हिँड्यो । त्यो दिन धादिङको सिम्लेमा बसेको टोलीले भोलिपल्टदेखि देवीघाट महादेवको मन्दिरमा सेल्टर बनाएर सहयोग अभियान परिचालन गरेको थियो ।
बाबा भन्नासाथ आमरूपमा लामो केश तथा दार्‍ही पालेको, गेरु वस्त्र लगाएको, निधारमा चन्दन घसेको व्यक्तित्वको झलक हाम्रो मनमा आउँछ । यद्यपि भूकम्पका बेला नेपाल आउँदा रामरहिमले केश र दार्‍ही त पालेका थिए तर गेरु वस्त्रको साटो चुज पेन्ट, टिसर्ट र स्पोटर््स जुत्ता लगाएका थिए । उनी बाबाभन्दा बढी हिन्दी फिल्मका हिरोजस्ता देखिन्थे । भरतको घरमा एक छाक खाना खाएका बाबाले उक्त दिन सादा रोटी र दाल खाए । त्यसपछि भने उनलाई सहयोगीहरू आफैंले खाना बनाएर ख्वाए ।
भूकम्पपीडितहरूलाई सहयोग गर्न आएका बाबाले आफू बस्ने रेडिमेट घर सँगै ल्याएका थिए । फोल्ड गर्न मिल्ने उक्त घरमा एसी जडान गरिएका तीनवटा कोठा थिए । ‘सानोतिनो दरबारजस्तो देखिन्थ्यो,’ बाबा रामरहिमसँग एक साता सँगै बसेका भरत भन्छन् ‘पञ्चायतकालमा विभिन्न जिल्लामा राजारानीको सवारी हुँदा पनि यस्तो व्यवस्थित इन्तजाम देखेको थिइनँ ।’ विश्वभर ५ करोडभन्दा बढी अनुयायी भएको दाबी गर्दै आएका यी स्वामी बोलीचालीमा भने खुला रहेको भरतको अनुभव छ । भरत भन्छन्, ‘बाबा रामरहिम दैनिक रूपमा भोलिपल्ट राहत बाँड्ने स्थानका बारेमा राम्रोसँग बुझ्थे, कहाँ बढी समस्या परेको छ त्यहाँ स्वयं उपस्थित हुन्थे अनि विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माणमा आफंै खट्थे ।’
छुट्टै राज्यको आभास
रामरहिम नेपालमा राहत वितरणका लागि आउँदा उनको उपस्थिति एउटा छुट्टै राज्यको आभास दिलाउने खालको थियो । रामरहिम भत्किएका घर बनाइदिने सबै सामग्रीदेखि आफ्नो निजी सुरक्षा टोलीसहित नेपाल आएका थिए । उनको टोलीमा करिब ८ सयवटा सवारी साधनमा घर बनाउने बाँस, डोरी, काँटीदेखि लिएर स्वयंसेवी (आर्मी ड्रेसमा) पनि थिए । त्यससँगै १० जना चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोली पनि रामरहिमको समूहमा सहभागी थियो । खाना पकाउने स्वयंसेवकसहितको उक्त उद्धार टोलीमा ५ सयभन्दा बढी सदस्य थिए । ‘एउटा छुट्टै राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधासहित ५ सयभन्दा बढीको टोली थियो,’ भरत भन्छन्– ‘त्यत्रो ठूलो टोली यति अनुशासित थियो कि मैले सेनामा पनि त्यस्तो अनुशासन देखेको छैन ।’ बाबा रामरहिम आफ्ना लागि ज्यान दिन पनि पछि नपर्ने अनुयायीहरूको टोली लिएर नेपाल आएका थिए, जसमा ९० भन्दा बढी युवती तथा महिला थिए ।
एकै दिनमा विद्यालय
भूकम्पले नुवाकोटको रणभूमेश्वर मावि भत्काएपछि बालबालिकाहरूको अध्ययन–अध्यापनमा बाधा उत्पन्न भएको थियो, तर डेरा सच्चा सौदाका स्वयंसेवकहरूले चमत्कारिक रूपमा ३४ घण्टामा उक्त विद्यालयका आठवटा ब्लक तयार गरिदिए । बाँसदेखि च्यादर (टिनको छाना) सम्म बोकेर आएको उक्त टोलीले यति चाँडो काम सम्पन्न गरेको देखेर स्थानीय बासिन्दाहरू चकित भएका थिए । उनीहरूले क्षति भएको अर्को विद्यालय देवीघाट प्रावि पनि १२ घण्टाभित्र पुनर्निर्माण गरिदिएका थिए । एक सातासम्म नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा राहत तथा उद्धारमा खटिएको रामरहिमको टोलीले १२ हजारभन्दा बढी टेन्ट तथा ६ हजारभन्दा बढी पालका घर बनाइदिएको दाबी गरिन्छ । त्यसैगरी उनीहरूले प्रत्येक परिवारलाई खाद्यान्नसहित ब्ल्यांकेटसमेत बाँडेका थिए ।
अनि खेदियो नुवाकोटबाट
राहत वितरणका क्रममा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी, जगदीश नरसिंह केसी, राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी आदि नेताले बाबा रामरहिमसँग भेट गरेका थिए । राहत वितरणमा आएका रामरहिम कांग्रेस तथा राप्रपा नेताहरूसँग नजिकिएपछि माओवादी केन्द्र एवं नेकपा एमाले नेताहरूले राहत वितरणमा राजनीति गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरे । उक्त विरोध–विरोधमा मात्र सीमित नभएर पीपलबोट भन्ने स्थानमा त आक्रमणमै उत्रिएपछि रामरहिम त्यहाँ लगिएका सामानहरू स्थानीय बासिन्दालाई बाँडिदिनु भन्दै काठमाडौं फर्किए र ललितपुरमा काम गर्न थाले । सामान्य १ लाख सहयोग गरेको कुरासमेत मिडियामा व्यापक प्रचार–प्रसार भएको त्यो समयमा त्यत्रो तामझामसहित राहत सामग्री लिएर आएका रामरहिम भने १० दिनपछि गुपचुप भारत फर्किए ।